Horjooge Alshabaab ah oo isu dhiibay ciidamada Dowladda, markii uu ka baxsaday Ceelbuur - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Horjoogihii Alshabaab ka tirsn, una qaabilsanaa dhinaca Caafimaadka ee Gobolka Galgaduud ayaa isku soo dhiibay Ciidamada Dowlada Federaalka ee ku sugan Galmudug.
Horjoogahan oo magaciisa lagu sheegay Cali Ibraahim ayaa mudo dheer Alshabaab u qaabilsanaa Caafimaadka Gobolka Galgaduud, wuxuuna isu dhiibay Ciidamada Gorgor ee Galmudug ka howlgala, sida tebisay warbaahinta dowladda.
Cali Ibraahim ayaa laga soo xigtay inuu ku qanci waayay dhibaatada kooxda Alshabaab ku heyso shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna kasoo baxsaday degmad Ceelbuur, isagoo ayaa xalay saqdii dhexe gaaray Degaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb.
Previous articleWeerarro ka dhacay magaalada Muqdisho iyo faahfaahinta Askar lagu khaarijiyay
Next articleRW Rooble oo difaacay Habraacii khilaafka dhaliyey ee Golaha Shacabka iyo Ballanqaad uu bixiyey